3. warqad ka socota shaqaalaha maddaarka | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3. warqad ka timid shaqaalaha garoonka diyaaradaha
3. warqad ka timid shaqaalaha garoonka diyaaradaha
29 / 09 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
3 wuxuu ka socdaa Istanbul. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha waxay la wadaageen culeyskooda wax soo saar, saarida waqti dheeri ah, iyo dhaqan xumo iyo sharci darro sharci darro ah ee xaaladaha shaqada ee dadweynaha iyadoo loo marayo warqad loo diray soL. Isagoo xoojinaya suurtagalnimada booqashada Erdogan ee 29 bishii Oktoobar, shaqaaluhu waxay yiraahdeen: nedeniyle Sababtoo ah suurtagalnimada this, saacadaha dheeraadka ah iyo cadaadiska wax soo saarka ayaa kordhay. Qiyaastii majirto axad markii aan shaqeynaynin
"Xitaa garan mayno imisa shaqaale ayaa dhintay ..."
Markii la ogaado inta qof ee ku dhimatay dilalka shaqo ee dhismaha garoonka diyaaradaha illaa hadda, shaqaaluhu waxay yiraahdeen, waxaan la kulannaa xadgudubka ugu ba'an ee xuquuqda dönem.
Waraaqda ay qoreen, shaqaaluhu waxay ku caddeeyeen in saacadaha dheeraadka ahi aysan ahayn xuquuq midig bidix ee loo doorto shaqaalaha, “Ma jiro wax axad ah oo aan shaqeyneyn. Intaa waxaa dheer, waqtiga, cadaadiska iyo xiisadda ayaa ah mid aad u sarreysa, gaar ahaan gobollada uu Tayyip Erdo wherean booqan doono.
WAA IN LAGU QAADO
"3. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha tamamı
Maalmahan ilaa 2015 3. xaalad aan inta badan ku soo aragno goobta dhismaha garoonka diyaaradaha ayaa bilaabatay inay mar kale dhacdo. In kasta oo aynan caddayn nooca xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya madaxdeenna awoodda jecel iyo maamulayaasha jacaylka-jacaylka badan u furay magacyadooda fiqiga ee cilmiga fiqiga, dhinaca kale, mashruucan wuxuu noqday aalad siyaasadeed danta awoodda.
Qeybta dhismaha, sida lagu yaqaan dadka deggan, ayaa durba mashquul ku ah saacadaha shaqada oo waxaa ku jira culeys iyo cadaadis ku filan. Sababta isbeddelka aan joogtada ahayn ee aan maanta ku aragnay ay tahay Maalinta Jamhuuriyadda ee soo socota. Tani waa xiisaha maalinta Jamhuuriyadda ee madaxdeena, oo aan ognahay inuusan jaceyl u laheyn jamhuuriyadda, in hogaamiyaha AKP ay macquul tahay inuu khudbad ka jeediyo garoonka diyaaradaha ee sanadkan si uu uga baxsado Marodrol of Anitkabir inta lagu gudajiro Maalinta Jamhuuriyda.
Hoggaamiyaha AKP ama ra'iisulwasaaraha ama mas'uul kasta oo ka tirsan wasiir ama qof kasta oo raba inuu booqdo ayaa booqan kara goobta dhismaha; Shaqaalaha 30.000 waxay ku shaqeeyaan gacmaheena inkasta oo ay jiraan xaalado xun oo dhan iyo in kasta oo khaladaadka ka jira xulashada garoonka diyaaradaha aan muujino guul shaqo oo wanaagsan, wejigeenna wuxuu muujiyaa mid ka mid ah dhismayaasha ugu weyn dalka iyo dabcan qof walbaa waa arki karaa. Hadday tahay in lagu faano garoonkan, waxaan nahay shaqaalaha xaqa u leh inaan sidan samayno, annaguna waxaan nahay kuwa daadinta dhididka dhismaha, hase yeeshe, booqashadan waxay ku dhacdaa annaga oo loo beddelay bandhig. Waqtiga booqashada kasta waa xilli jahwareer buuxa uu ka jiro goobta shaqada halkaas oo qorshaha-kontoroolka ganacsiga oo dhan uu gacantiisa ka dhacay. Ma garanayno imisa qof ayaa ku dhimatay garoonkan dhisme ee madaarka ilaa maanta, laakiin waxaan dhihi karnaa in inta ugu badan ee aan ognahay ay yihiin waqtiyo dulmi aan xakameynayn anagoo booqanaya dadka noocaas ah iyo wixii la mid ah.
Waxaan ka walaacsanahay in dhacdo noocaan oo kale ah dhowaan dhacdo. Waxaan uga digeynaa mas'uuliyiinta in aysan ku celin dilalka goobta shaqada ee ka dhashay shuruudahan dulmiga ah.
Waqti dheeri ah ee goobta dhismaha ma ahan xuquuq ay sii isticmaali karaan annaga oo ah shaqaalaha haddii ay doorbidaan, xuquuqda aan ka shaqeyn karin saacadaha dheeraadka ah ee goobta shaqada ayaa loo waayey shaqaalaha. Ma jiro Axad maalinta aan shaqeyneyn. Intaas waxaa sii dheer, xawaaraha shaqada, cadaadiska iyo xiisadda gobolladaan aad ayey u kacsan tahay, gaar ahaan gobollada uu ku booqdo hoggaamiyaha AKP. Xiisadan ayaa sidoo kale ah iyada oo loo marayo ganaaxyada iyo carqaladeynta shirkadaha ku sugan goobta dhismaha halkaas oo kumanaan qandaraasleyaal ah ay ka shaqeeyaan, laakiin tani sidoo kale waa biilka ay qandaraas-hoosaadyada soo marinayaan madaxda shaqaalaha waxaan gooynaynaa mushaharka dib-u-dhigga ama bixin la'aanta, magdhowga shaqo ka eryidda, ku-qaadashada xuquuqda waqti-dhaafka. waxaan ku nool nahay maalin walba laakiin gaar ahaan xilliyada cadaadiska aadka u daran.
Çorlu hooyadeed oo wiilkeeda ku lumisay shil tareen…
Xaruunta Magaalada Sinop Ma Jiro Wax Gaari Ah, Kirsehir,
Waxaa jira xaalado aan ku socon tareenka garoonka diyaaradaha 3.
29 ayaa la furi doonaa bisha Oktoobar. Boqolaal inbadan oo garoonka diyaaradaha ah…
Waa maxay sababta dhimashada loo qariyay maddaarka saddexaad?
Shaqaalaha martida ee mashruuca maddaarka 3 ee Istanbul
3. Goobta garoonka dhismaha
3. shaqaalaha garoonka diyaaradaha